စကားကြီးလေးခွန်း မပေါက်ကြားစေနဲ့(အရမ်းကောင်းတဲ့ဖဟုသုတပေါ ဖတ်ကြည့်နော်) – Tameelay
ရှေးတုန်းကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာမင်းလုပ် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာ တစ်နေ့ မှာသူဆင်းရဲတစ်ယောက် အယောင်ဆောင်ရုပ်ဖျ က်ပြီးတိုင်းပြည်အခြေအနေလေ့လာဖို့ မင်းနေပြည်က တိတ်တဆိတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
သူ ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာက အလွန် ဆင်းရဲတဲ့အဖိုးအိုလင်မယားနေတဲ့တဲအိမ်အ စုတ်ကလေးဆီကိုပါ။
အဖိုးအိုလင်မယားဟာပင်ပမ်းဆင်းရဲစွာနဲ့ ယာခင်းထဲမှာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် စားသောက် နေရတာအယောင်ဆောင်ဘုရင်ကြီးတွေ့ရပါ တယ် ။
ဒီမှာတစ်ညအိပ် တည်းဖို့ခွင့်တောင်း တော့အဖိုးအိုလင်မယားကခွင့်ပြု ပြီးလိုလေး မရှိအောင်လဲရှိတာလေးနဲ့ဧည့်ခံကျွေးမွေးကြ ပါတယ်။
လူဆင်းရဲပေမယ့်စေတနာမဆင်းရဲ တဲ့ အဖိုးအိုလင်မယားကို အယောင်ဆောင် ဘုရင်ကြီးစိတ်ထဲကြိတ်ပြီး ကျေးဇူးတင်နေမိ တာပေါ့။
ညကျတော့အိပ်ယာမဝင်ခင် အတူ ထိုင်စကားစမြီပြောကြတဲ့အခါဘုရင်ကြီးက..
” အဖိုးတို့မှာစားမယ့်သောက်မယ့်လူလဲမရှိ ဘဲ ဘာလို့ ဒီလောက် ပင်ပမ်းကြီးစွာ အလုပ် တွေလုပ်နေရတာလဲ..
ဒီအရွယ်ဆိုတာသား ထောက်သမီးခံအလုပ်လွှဲထားပြီးဘုရားသွား ကျောင်းတက်လုပ်နေရမှာမဟုတ်လော “..
ဟုပြောပါတယ်။ဒီအခါအဖိုးအိုကဒီလိုပြန်ပြီး ပြောပါတယ်… “အမောင်ပြောတာဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့်သားသမီးဆိုတာလဲသူ့မီးနဲ့သူ့ အပူ ဖြစ်နေကြတာကလား..
ကျုပ်တို့မှာလဲကိုယ် စားဘို့တင်မကခိုးမှူးကြီးလဲပေးရသေးတယ် အာဂန္တု ဧည့်သည်ကိုလဲကျွေးရတယ်..
သမုဒ္ဒ ရာထဲလဲပစ်ချ နေရသေးတယ်ရန်သူကိုလဲရှာ ဖွေကျွေးမွေးနေရပါတယ် ” အဖိုးအိုစကားကဘုရင်ကြီးအတွက်ထူးဆန်း နေပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ကိုလဲသဘောမပေါက် တာကြောင့်အဖိုးအိုကိုပြန်မေးမိတော့တယ်။ “အဖိုးစကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုတဆိတ်လောက် ရှင်းပြပါလားခင်ဗျာ..
” ဒီအခါအဖိုးအိုကအဓိပ္ပါယ်ကိုရှင်းပြပါတယ် “ဒီလိုပါအမောင်.ခိုးမှူးကြီးကိုပေးရတယ်ဆို တာကတိုင်းပြည်ကိုဓားပြသူခိုးရန်သူမျိုးတွေ ရဲ့ရန်က
ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ် တို့အားအခွန်ဘဏ္ဍာ ဆက်သပေးနေရတယ် လို့ဖြစ်ပါတယ် ”
“ကျုပ်တို့တွေနဖူးကချွေးခြေမကျအောင်ရှာ ဖွေထားရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူခိုးဓားပြလက်မပါ
ရအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့ ခိုးသူတို့ရဲ့အကြီးအမှူးလို့ဆိုလိုတာပါ ” ဘုရင်ကြီးဟာ အဖိုးအိုရဲ့အဖြေကို သဘော ကျ သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့နောက်ထပ်စကားတစ် ခွန်းကိုထပ်မေးပြန်ပါတယ်။
“အာဂန္တု ဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေးရတယ်ဆို တာကရော ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ပါလိမ့်ဗျာ”
“လောကမယ်မိဘကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် ခဲ့ရတဲ့ သားသမီးဆိုတာ တကယ်တော့ ဧည့် သည်တွေပါဘဲအမောင်..
အချိန်တန်အရွယ် ရောက်တဲ့အခါသူတို့လမ်းသူတို့လျှောက်ကြ တာဘဲ မဟုတ်လား ဒါကြောင့်သူတို့ကို အာ ဂန္တု့ လို့ဆိုရတာပါမောင် ” ဒီစကားကိုလဲဘုရင်ကြီးသဘောကျ ပြန်ပါ တယ်။
“သမုဒ္ဒရာထဲလဲချ ရတယ်ဆိုတာကရောဘာ အဓိပ္ပါယ်ပါလဲအဖိုး ”
“ဒါကဒီလိုပါ..ချောင်းမြစ်အသွယ်သွယ်တို့ ကလာတဲ့ရေမှန်သမျှ ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ ထဲစီးဝင်ကြပေမဲ့ပြည့်ရိုးထုံးစံမရှိသလိုဘဲတ နေ့တနေ့ကျုပ်တို့စားသမျှ အားလုံးဝမ်းခေါင်း ထဲမှာပြည့်တယ်လို့မရှိတာအမောင်အသိဘဲ မဟုတ်လား..
ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာထဲပစ်ထဲ့ရ တယ်ဆိုတာရှာဖွေရသမျှကျုပ်တို့အသက်ရှင် သန်ဖို့ဒီဝမ်းခေါင်းထဲအစာစားပြီးဖြည့်ထဲ့နေရ တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဘဲ ”
“ဒါက ပိုအရေးကြီးပါတယ် အမောင်..ကိုယ် ကချစ်ကြင်လို့ပေါင်းသင်းနေထိုင်နေတဲ့ဇနီးမ ယားဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူပါဘဲ..”
“အလို ဒီစကားကတော့အဆန်းပါလား ရှင်း ပြပေးပါဦးအဖိုးရဲ့ ”
“စိတ်တူကိုယ်တူဆိုပြီးကိုယ်ကချ စ်ခင်ပေါင်း သင်းနေပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသက်စည်းစိမ်ကိုအ များဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်ချေရှိတာဒီဇနီးမယားပါဘဲ အမောင်..
ဒီစကားကတော့အရေးကြုံ လာတဲ့ အခါမှအမောင်သိပါလိမ့်မယ်.. အခုကတော့ ရန်သူကိုလဲရှာဖွေကျွေးမွေးနေတယ်ဘဲ မှတ် သားလိုက်ပါအမောင် ”
နောက်ဆုံးစကားကိုဘဝင်မကျ ပေမယ့်မှတ် သားလောက်စရာ မို့လက်ခံလိုက်ပြီး သူဟာ ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်တော့ အဖိုး အိုလင်မယားဟာ ပြူးပြူးပျာပျာဖြစ်သွားပါ တော့တယ်..။
“မကြောက်ကြပါနဲ့အဖိုး..တစ်ခုတော့ပြောပါ ရစေအခုအဖိုးပြောတဲ့စကားကြီးလေးခွန်းကို တော့ဘယ်သူကိုမှမပြောမိစေဖို့မှာခဲ့ပါရစေ.. တကယ်လို့ပေါက်ကြားခဲ့ရင်သေဒဏ်သင့်မှာ ကိုသဘောပေါက်စေချ င်တယ်..”
ဤသို့ဖြင့်ဘုရင်ကြီးလဲနန်းတွင်းပြန်သွားပြီး နောက်တစ်နေ့ညီလာခံတွင်အဖိုးအိုပြောဆို ခဲ့သောစကားကြီးလေးခွန်းကိုမှူးးမတ်တွေကို ပြောဆိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ကိုမေးမြန်း ပါတော့တယ် ။
မှူးမတ်တွေအားလုံးမဖြေဆို နိုင်ကြပါဘူး။ဒီတော့ဘုရင်ကြီးကဖြေဆိုဖို့ အ ချိန် ခုနစ်ရက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
မှူးမတ်တွေအားလုံး အကြပ်ရိုက်နေချိန်မှာ လူလည်အမတ်တစ်ယောက်ကတော့ ဘုရင် ကြီး ခရီးထွက်ပြီးပြန်လာမှ ဒီစကားလေးခွန်း ကိုမေးတာဆိုတော့
အကြောင်းရရှိရမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး ဘုရင်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်း ကိုစုံစမ်းပြီး ရှာဖွေရာက အဖိုးအိုလင်မယားရှိ ရာကို ရောက်သွားပါတော့တယ် ။
အမတ်လူ လည်ဟာ အဖိုးအိုကို တံစိုးလက်ဆောင်ပေး ပြီးစကားလေးခွန်းကိုမေးပေမယ့်အဖိုးအိုဟာ လုံးဝမပြောပါဘူး။
နောက်ဆုံးအဖိုးအိုရဲ့ဇနီးဖွားအိုကိုအသပြာ ငွေ ၁၀၀၀ ပေးပြီးမေးတဲ့အခါဖွားအိုကငွေကို ယူပြီးစကားလေးခွန်းအဓိပ္ပါယ်ကိုဖွင့်ဟပြော ကြားလိုက်ပါတယ် ။
ဒါနဲ့ရက်ချိန်းခုနစ်ရက်ပြည့်လို့ညီလာခံပြန်ဝင် တဲ့အခါ ဘုရင်ကြီးကိုဘယ်သူမှ အဖြေမပေး နိုက်ကြပေမယ့် လူလည်အမတ်ကတော့ ခပ် ကြွားကြွားလေးဖြေနိုင်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဘုရင်ကြီးကသူ့အစွမ်းအစနဲ့ဖြေ နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသိနေတော့ မှန်မှန်မပြော သေဒဏ်ပေးမယ်.
ဘယ်လိုသိလာတာလဲဆို တာမှန်မှန်ပြောဆိုပြီးအကြပ်ကိုင်မေးတော့မှ အဖိုးအိုလင်မယားဆီကသိလာတာလို့အမှန် အတိုင်းပြောပါတော့တယ်။
ဘုရင်ကြီးဟာအဖိုးအိုလင်မယားကိုအမျ က် မာန်ရှပြီးရှေ့တော်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရှေ့ တော်ရောက်တဲ့အခါ… “အဖိုး..ပေးခဲ့တဲ့ဂတိကိုဖျ က်ပြီးဘာလို့တား မြစ်ချ က်ကိုလွန်ဆန်ရတာလဲ..သေဒဏ်ပေး ခံရမှာကိုမကြောက်ဖူးလား ”
“မင်းကြီး..ကျွန်တော်မျိုးဟာဆင်းရဲနုံခြာပေ မယ့်ဂတိတစ်လုံးကိုအသက်ထက်ကာကွယ် ပါတယ်..
ကျွန်တော်မျိုး၏ဇနီးပြောကြားခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်.အသပြာငွေ ၁၀၀၀ အတွက် ကျွန်တော်မျိုး၏အသက်ကို ရောင်းစားသည့်
ဇနီးသည်ဟာအနီးဆုံးရန်သူဖြစ်ကြောင်းမင်း ကြီး ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီ ယုံကြည်ပါတယ်..”
ဒီတော့မှဘုရင်ကြီးဟာစိတ်ထဲဘဝင်မကျ ခဲ့ တဲ့နောက်ဆုံးစကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုနားလည် လက်ခံသွားပြီးသူဆင်းရဲအဖိုးအိုလင်မယား ကို ဆုလာဘ်များ ပေးသနား လိုက်ပါတော့ တယ် ။
lubo blog မှကူးယူတင်ပြသည်
ရှေးတုနျးကတိုငျးပွညျတဈပွညျမှာမငျးလုပျ အုပျခြုပျနတေဲ့ဘုရငျကွီးတဈပါးဟာ တဈနေ့ မှာသူဆငျးရဲတဈယောကျ အယောငျဆောငျရုပျဖြ ကျပွီးတိုငျးပွညျအခွအေနလေလေ့ာဖို့ မငျးနပွေညျက တိတျတဆိတျထှကျခဲ့ပါတယျ။
သူ ပထမဆုံး ရောကျခဲ့တဲ့နရောက အလှနျ ဆငျးရဲတဲ့အဖိုးအိုလငျမယားနတေဲ့တဲအိမျအ စုတျကလေးဆီကိုပါ။
အဖိုးအိုလငျမယားဟာပငျပမျးဆငျးရဲစှာနဲ့ ယာခငျးထဲမှာ စိုကျပြိုးလုပျကိုငျ စားသောကျ နရေတာအယောငျဆောငျဘုရငျကွီးတှရေ့ပါ တယျ ။
ဒီမှာတဈညအိပျ တညျးဖို့ခှငျ့တောငျး တော့အဖိုးအိုလငျမယားကခှငျ့ပွု ပွီးလိုလေး မရှိအောငျလဲရှိတာလေးနဲ့ဧညျ့ခံကြှေးမှေးကွ ပါတယျ။
လူဆငျးရဲပမေယျ့စတေနာမဆငျးရဲ တဲ့ အဖိုးအိုလငျမယားကို အယောငျဆောငျ ဘုရငျကွီးစိတျထဲကွိတျပွီး ကြေးဇူးတငျနမေိ တာပေါ့။
ညကတြော့အိပျယာမဝငျခငျ အတူ ထိုငျစကားစမွီပွောကွတဲ့အခါဘုရငျကွီးက..
” အဖိုးတို့မှာစားမယျ့သောကျမယျ့လူလဲမရှိ ဘဲ ဘာလို့ ဒီလောကျ ပငျပမျးကွီးစှာ အလုပျ တှလေုပျနရေတာလဲ..
ဒီအရှယျဆိုတာသား ထောကျသမီးခံအလုပျလှဲထားပွီးဘုရားသှား ကြောငျးတကျလုပျနရေမှာမဟုတျလော “..
ဟုပွောပါတယျ။ဒီအခါအဖိုးအိုကဒီလိုပွနျပွီး ပွောပါတယျ… “အမောငျပွောတာဟုတျတော့လဲဟုတျပါရဲ့ ဒါပမေယျ့သားသမီးဆိုတာလဲသူ့မီးနဲ့သူ့ အပူ ဖွဈနကွေတာကလား..
ကြုပျတို့မှာလဲကိုယျ စားဘို့တငျမကခိုးမှူးကွီးလဲပေးရသေးတယျ အာဂန်တု ဧညျ့သညျကိုလဲကြှေးရတယျ..
သမုဒ်ဒ ရာထဲလဲပဈခြ နရေသေးတယျရနျသူကိုလဲရှာ ဖှကြှေေးမှေးနရေပါတယျ ” အဖိုးအိုစကားကဘုရငျကွီးအတှကျထူးဆနျး နပေါတယျ။
အဓိပ်ပါယျကိုလဲသဘောမပေါကျ တာကွောငျ့အဖိုးအိုကိုပွနျမေးမိတော့တယျ။ “အဖိုးစကားရဲ့အဓိပ်ပါယျကိုတဆိတျလောကျ ရှငျးပွပါလားခငျဗြာ..
” ဒီအခါအဖိုးအိုကအဓိပ်ပါယျကိုရှငျးပွပါတယျ “ဒီလိုပါအမောငျ.ခိုးမှူးကွီးကိုပေးရတယျဆို တာကတိုငျးပွညျကိုဓားပွသူခိုးရနျသူမြိုးတှေ ရဲ့ရနျက
ကာကှယျပေးထားတဲ့ဘုရငျမငျးမွတျ တို့အားအခှနျဘဏ်ဍာ ဆကျသပေးနရေတယျ လို့ဖွဈပါတယျ ”
“ကြုပျတို့တှနေဖူးကခြှေးခွမေကအြောငျရှာ ဖှထေားရတဲ့ဥစ်စာတှကေိုသူခိုးဓားပွလကျမပါ
ရအောငျကာကှယျထိနျးသိမျးပေးနိုငျစှမျးရှိလို့ ခိုးသူတို့ရဲ့အကွီးအမှူးလို့ဆိုလိုတာပါ ” ဘုရငျကွီးဟာ အဖိုးအိုရဲ့အဖွကေို သဘော ကြ သှားပါတယျ။ ဒါနဲ့နောကျထပျစကားတဈ ခှနျးကိုထပျမေးပွနျပါတယျ။
“အာဂန်တု ဧညျ့သညျကိုကြှေးမှေးရတယျဆို တာကရော ဘယျလိုအဓိပ်ပါယျပါလိမျ့ဗြာ”
“လောကမယျမိဘကကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျ ခဲ့ရတဲ့ သားသမီးဆိုတာ တကယျတော့ ဧညျ့ သညျတှပေါဘဲအမောငျ..
အခြိနျတနျအရှယျ ရောကျတဲ့အခါသူတို့လမျးသူတို့လြှောကျကွ တာဘဲ မဟုတျလား ဒါကွောငျ့သူတို့ကို အာ ဂန်တု့ လို့ဆိုရတာပါမောငျ ” ဒီစကားကိုလဲဘုရငျကွီးသဘောကြ ပွနျပါ တယျ။
“သမုဒ်ဒရာထဲလဲခြ ရတယျဆိုတာကရောဘာ အဓိပ်ပါယျပါလဲအဖိုး ”
“ဒါကဒီလိုပါ..ခြောငျးမွဈအသှယျသှယျတို့ ကလာတဲ့ရမှေနျသမြှ ဟာပငျလယျသမုဒ်ဒရာ ထဲစီးဝငျကွပမေဲ့ပွညျ့ရိုးထုံးစံမရှိသလိုဘဲတ နတေ့နကြေု့ပျတို့စားသမြှ အားလုံးဝမျးခေါငျး ထဲမှာပွညျ့တယျလို့မရှိတာအမောငျအသိဘဲ မဟုတျလား..
ဒါကွောငျ့သမုဒ်ဒရာထဲပဈထဲ့ရ တယျဆိုတာရှာဖှရေသမြှကြုပျတို့အသကျရှငျ သနျဖို့ဒီဝမျးခေါငျးထဲအစာစားပွီးဖွညျ့ထဲ့နရေ တယျလို့ဆိုလိုတာပါဘဲ ”
“ဒါက ပိုအရေးကွီးပါတယျ အမောငျ..ကိုယျ ကခဈြကွငျလို့ပေါငျးသငျးနထေိုငျနတေဲ့ဇနီးမ ယားဟာကိုယျ့ရဲ့ရနျသူပါဘဲ..”
“အလို ဒီစကားကတော့အဆနျးပါလား ရှငျး ပွပေးပါဦးအဖိုးရဲ့ ”
“စိတျတူကိုယျတူဆိုပွီးကိုယျကခြ ဈခငျပေါငျး သငျးနပေမေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အသကျစညျးစိမျကိုအ မြားဆုံးဒုက်ခပေးနိုငျခရြှေိတာဒီဇနီးမယားပါဘဲ အမောငျ..
ဒီစကားကတော့အရေးကွုံ လာတဲ့ အခါမှအမောငျသိပါလိမျ့မယျ.. အခုကတော့ ရနျသူကိုလဲရှာဖှကြှေေးမှေးနတေယျဘဲ မှတျ သားလိုကျပါအမောငျ ”
နောကျဆုံးစကားကိုဘဝငျမကြ ပမေယျ့မှတျ သားလောကျစရာ မို့လကျခံလိုကျပွီး သူဟာ ဘုရငျဖွဈကွောငျး ပွောဆိုလိုကျတော့ အဖိုး အိုလငျမယားဟာ ပွူးပွူးပြာပြာဖွဈသှားပါ တော့တယျ..။
“မကွောကျကွပါနဲ့အဖိုး..တဈခုတော့ပွောပါ ရစအေခုအဖိုးပွောတဲ့စကားကွီးလေးခှနျးကို တော့ဘယျသူကိုမှမပွောမိစဖေို့မှာခဲ့ပါရစေ.. တကယျလို့ပေါကျကွားခဲ့ရငျသဒေဏျသငျ့မှာ ကိုသဘောပေါကျစခြေ ငျတယျ..”
ဤသို့ဖွငျ့ဘုရငျကွီးလဲနနျးတှငျးပွနျသှားပွီး နောကျတဈနညေီ့လာခံတှငျအဖိုးအိုပွောဆို ခဲ့သောစကားကွီးလေးခှနျးကိုမှူးးမတျတှကေို ပွောဆိုမေးခှနျးထုတျပွီးအဓိပ်ပါယျကိုမေးမွနျး ပါတော့တယျ ။
မှူးမတျတှအေားလုံးမဖွဆေို နိုငျကွပါဘူး။ဒီတော့ဘုရငျကွီးကဖွဆေိုဖို့ အ ခြိနျ ခုနဈရကျပေးလိုကျပါတယျ ။
မှူးမတျတှအေားလုံး အကွပျရိုကျနခြေိနျမှာ လူလညျအမတျတဈယောကျကတော့ ဘုရငျ ကွီး ခရီးထှကျပွီးပွနျလာမှ ဒီစကားလေးခှနျး ကိုမေးတာဆိုတော့
အကွောငျးရရှိရမယျလို့ စဉျးစားပွီး ဘုရငျကွီးသှားခဲ့တဲ့ လမျးကွောငျး ကိုစုံစမျးပွီး ရှာဖှရောက အဖိုးအိုလငျမယားရှိ ရာကို ရောကျသှားပါတော့တယျ ။
အမတျလူ လညျဟာ အဖိုးအိုကို တံစိုးလကျဆောငျပေး ပွီးစကားလေးခှနျးကိုမေးပမေယျ့အဖိုးအိုဟာ လုံးဝမပွောပါဘူး။
နောကျဆုံးအဖိုးအိုရဲ့ဇနီးဖှားအိုကိုအသပွာ ငှေ ၁၀၀၀ ပေးပွီးမေးတဲ့အခါဖှားအိုကငှကေို ယူပွီးစကားလေးခှနျးအဓိပ်ပါယျကိုဖှငျ့ဟပွော ကွားလိုကျပါတယျ ။
ဒါနဲ့ရကျခြိနျးခုနဈရကျပွညျ့လို့ညီလာခံပွနျဝငျ တဲ့အခါ ဘုရငျကွီးကိုဘယျသူမှ အဖွမေပေး နိုကျကွပမေယျ့ လူလညျအမတျကတော့ ခပျ ကွှားကွှားလေးဖွနေိုငျလိုကျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ဘုရငျကွီးကသူ့အစှမျးအစနဲ့ဖွေ နိုငျတာမဟုတျဘူးသိနတေော့ မှနျမှနျမပွော သဒေဏျပေးမယျ.
ဘယျလိုသိလာတာလဲဆို တာမှနျမှနျပွောဆိုပွီးအကွပျကိုငျမေးတော့မှ အဖိုးအိုလငျမယားဆီကသိလာတာလို့အမှနျ အတိုငျးပွောပါတော့တယျ။
ဘုရငျကွီးဟာအဖိုးအိုလငျမယားကိုအမြ ကျ မာနျရှပွီးရှတေ့ျောဆငျ့ချေါလိုကျပါတယျ။ရှေ့ တျောရောကျတဲ့အခါ… “အဖိုး..ပေးခဲ့တဲ့ဂတိကိုဖြ ကျပွီးဘာလို့တား မွဈခြ ကျကိုလှနျဆနျရတာလဲ..သဒေဏျပေး ခံရမှာကိုမကွောကျဖူးလား ”
“မငျးကွီး..ကြှနျတျောမြိုးဟာဆငျးရဲနုံခွာပေ မယျ့ဂတိတဈလုံးကိုအသကျထကျကာကှယျ ပါတယျ..
ကြှနျတျောမြိုး၏ဇနီးပွောကွားခွငျး သာဖွဈပါတယျ.အသပွာငှေ ၁၀၀၀ အတှကျ ကြှနျတျောမြိုး၏အသကျကို ရောငျးစားသညျ့
ဇနီးသညျဟာအနီးဆုံးရနျသူဖွဈကွောငျးမငျး ကွီး ဒီလောကျဆိုသဘောပေါကျနားလညျပွီ ယုံကွညျပါတယျ..”
ဒီတော့မှဘုရငျကွီးဟာစိတျထဲဘဝငျမကြ ခဲ့ တဲ့နောကျဆုံးစကားရဲ့အဓိပ်ပါယျကိုနားလညျ လကျခံသှားပွီးသူဆငျးရဲအဖိုးအိုလငျမယား ကို ဆုလာဘျမြား ပေးသနား လိုကျပါတော့ တယျ ။
lubo blog မှကူးယူတငျပွသညျ
လူနာ အနားမှာ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ပါ . . .
တစ်နေက . . . ၊ ကျွန်မတို့ တိုက်အောက်ထပ်မှာနေတဲ့ ၊ခင်မင်ရတဲ့ ကြီးကြီးတစ်ယောက် အတော်လေး မကျန်းမမာဖြစ်နေလို့ သတင်းသွားမေးဖြစ်တယ် ။ အိပ်ယာထဲလဲနေတာ ကြာပါပြီ … လူကြီးရောဂါပေါ့ ။ အသက်က 74 နှစ်ဆိုတော့ အိုနာ လို့တောင် ပြောလို့ရနေပါပြီ ။ …
အတန်အသင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ နေရာမျိုးတွေကို ခရီးသွားဖို့ ရွေးချယ်ပါ။ စီးပွားရေးလောကမှာ အရာရာတိုင်းလိုလို ပုံမှန်တိုးတက် ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေ အတွက် အားလပ်ရက်တွေမှာ အပန်းဖြေခရီးထွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးကို ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ အကယ်၍ ထွက်ခွင့်ရသွားမယ် ဆိုရင်တောင်မှ တချို့ဆိုရင် အလုပ်တွေ၊ တာဝန်တွေကို ခေါင်းပေါ်ရွက်၊ …
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ခေတ်သစ် အနာထပိဏ်သူဌေး လင်မယား
ခေတ်သစ် အနာထပိဏ်သူဌေးလင်မယား ပီတိတွေဖြန့်ဝေကူးစက်ပြီ မင်္ဂလာသတင်းဆိုတာ ဒီလိုသတင်းပါဗျို့ မိုးကုတ်မြို့ အောင်ချမ်းသာရပ် နယ်မြေ ၁၇မှာနေထိုင်သော သူဌေးကြီး ဦးတင်ဆွေ ဒေါ်အလေးမိသားစုမှ ဆန်အိပ်ပေါင်း၅၃၀၀ကျော်အား စေတနာမေတ္တာအရင်းခံစိတ်ထားဖြင့် မဟာမုနိဘုရားဝင်းတွင်​ အိမ်ထောင်စုတစုလျှင်ဆန်​တစ်အိပ်​နူန်းလှူဒန်း ပါသည် အများဝမ်းသာမုဒိတာပွားများ သာဓုခေါ်နိုင်ရန် ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ ခတျေသဈ အနာထပိဏျသူဌေးလငျမယား ပီတိတှဖွေနျ့ဝကေူးစကျပွီ မင်ျဂလာသတငျးဆိုတာ ဒီလိုသတငျးပါဗြို့ …